ချွေး ပါ မွေး အောင် ရေ မွေး ဆွတ် နည်း - Real Gaming Myanmar
ချွေး ပါ မွေး အောင် ရေ မွေး ဆွတ် နည်း
ကျွန် တော် က သစ် သီး ရ နံ့ တွေ ကို ကြိုက် ပါ တယ် ။ ဥ ပ မာ သ င်္ဘော သီး ၊ နာ နတ် သီး ၊ က တ္တီ ဘာ သီး ဒါ ပေ မယ့် ရေ မွေး တွေ ကို တော့ ကြိုက် ခဲ ပါ တယ် ။ သ ဘာ ဝ ကို ပိုသ ဘော ကျ ပါ တယ် ။ ရှား ရှား ပါး ပါး ရေ မွေး တွေ ဆို ရင် ဈေး က လဲ ကြီး ပါ သေး တယ် ။ ယူ က လစ် ဆီ တို့ ဘာ တို့ တော့ ကြိုက် ပါ တယ် ။ မ သုံး တတ် ရင် လဲ ခ ဏ နဲ့ ကုန် သွား နိုင် ပါတယ် ။
ဘယ် နား တွေ ကို ရေ မွေး ဆွတ် ရ မှာ လဲ ?
နား ရွက် နောက် ၊ လက် ကောက် ဝတ် ၊ ခြေ ကျင်း ဝတ် တွေ ဆို လုံ လောက် ပါ တယ် ( အ နံ့မ ပြင်း တဲ့ ရေ မွေး ဆို ရင် မေး ရိုး အောက် မှာ ပါ ဆွတ် နိုင် ပါ တယ် ။ ) ဒါ ဆို ရင် ရေ မွေး ကသွေး ထဲ မှာ ပါ စိမ့် ဝင် ပြီး ချွေး မှာ ပါ မွေး နေ ပါ လိမ့် မယ် ။ နေ ရောင် မ ထိ တဲ့ နေ ရာ တွေ ဖြစ် တာ မို့ လွယ် လွယ် လဲ မ ခြောက် သွေ့ နိုင် ပါ ဘူး ။
Lavender Oil ဆီ ဆို ရင် မွေး လဲ မွေး ပိုး မွှား တွေ လဲ ကြောက် တာ ကြောင့် ပိုး မွှား လဲ ကင်းစင် စေ နိုင် ပါ လိမ့် မယ် ။
ကဲ ဒီ လောက် ဆို ရင် ရည်း စား နဲ့ ချိန်း ထား ရင် ရေ မွေး ဘယ် လို ဆွတ် ထား ရ မ လဲ သိ ပြီနော်
ခြှေး ပါ မှေး အောငျ ရေ မှေး ဆှတျ နညျး
ကြှနျ တျော က သဈ သီး ရ နံ့ တှေ ကို ကွိုကျ ပါ တယျ ။ ဥ ပ မာ သ င်ျဘော သီး ၊ နာ နတျ သီး ၊ က တ်တီ ဘာ သီး ဒါ ပေ မယျ့ ရေ မှေး တှေ ကို တော့ ကွိုကျ ခဲ ပါ တယျ ။ သ ဘာ ဝ ကို ပိုသ ဘော ကြ ပါ တယျ ။ ရှား ရှား ပါး ပါး ရေ မှေး တှေ ဆို ရငျ ဈေး က လဲ ကွီး ပါ သေး တယျ ။ ယူ က လဈ ဆီ တို့ ဘာ တို့ တော့ ကွိုကျ ပါ တယျ ။ မ သုံး တတျ ရငျ လဲ ခ ဏ နဲ့ ကုနျ သှား နိုငျ ပါတယျ ။
ဘယျ နား တှေ ကို ရေ မှေး ဆှတျ ရ မှာ လဲ ?
နား ရှကျ နောကျ ၊ လကျ ကောကျ ဝတျ ၊ ခွေ ကငျြး ဝတျ တှေ ဆို လုံ လောကျ ပါ တယျ ( အ နံ့မ ပွငျး တဲ့ ရေ မှေး ဆို ရငျ မေး ရိုး အောကျ မှာ ပါ ဆှတျ နိုငျ ပါ တယျ ။ ) ဒါ ဆို ရငျ ရေ မှေး ကသှေး ထဲ မှာ ပါ စိမျ့ ဝငျ ပွီး ခြှေး မှာ ပါ မှေး နေ ပါ လိမျ့ မယျ ။ နေ ရောငျ မ ထိ တဲ့ နေ ရာ တှေ ဖွဈ တာ မို့ လှယျ လှယျ လဲ မ ခွောကျ သှေ့ နိုငျ ပါ ဘူး ။
Lavender Oil ဆီ ဆို ရငျ မှေး လဲ မှေး ပိုး မှား တှေ လဲ ကွောကျ တာ ကွောငျ့ ပိုး မှား လဲ ကငျးစငျ စေ နိုငျ ပါ လိမျ့ မယျ ။
ကဲ ဒီ လောကျ ဆို ရငျ ရညျး စား နဲ့ ခြိနျး ထား ရငျ ရေ မှေး ဘယျ လို ဆှတျ ထား ရ မ လဲ သိ ပွီနျော
Previous: မြင်ကွန်း မြင်းခုန်တိုင်အရေးအခင်း (သို့မဟုတ်) သီလဝ နှင့် ဖိုးထင်
Next: တစ်ပတ်စာ မနောမယဟောစာတမ်း ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့မှ ဇွန်လ ၁၈ ရက်နေ့အထိ